Freedom House: Kukurudzirana Kushandisa Indaneti seChombo Kuchiri Pasi muZimbabwe
Sangano reFreedom House rinoti zvimhingamipinyi zvakasiyana siyana munyaya dzekufambiswa kwemashoko muZimbabwe zvinogona kutadzisa kushandiswa zvakakwana kweindaneti senzira yekukurudzira vanhu kuti vatore matanho munyaya dzezvematongerwo enyika.
Gwaro raburitswa neFreedom House rinonzi Freedom On The Net 2011, rinoti zvikamu gumi nechimwe kubva muzana (11 %) zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika mamiriyoni gumi nemaviri nezviuru zvitanhatu (12.6 million) ndizvo chete zvinokwanisa kuwana mukana wekushandisa indaneti.
Asi ongororo iyi inoti hapana mushandirapamwe pakushandisa mukana uyu mukukurudzira shanduko munyika munyaya dzezvematongerwo.
Freedom House inoti kunyange hazvo hurumende isinganyanyopindira mukushandiswa kweindaneti nenharembozha muZimbabwe, pane zviratidzo zvekuti hurumende ine chido chikuru chekuti inge ichiongorora nzira dzekufambiswa kwemashoko idzi.
Mugore ra2007 hurumende yakadzikawo mutemo weInterception of Communication Act, uyo unoibvumidza kuongorora matsamba, nhare neindaneti.
Vanoona nezvezvirongwa zweFreedom House mudunhu rekuchamhembe kweAfrica, Muzvare Megan Shaw, vanoti munyika dzakaita seEgypt dzakasangana nekuratidzira munyaya dzezvematongerwo enyika, vanhu vazhinji vanoshandisa indaneti, izvo zvakaita kuti vasanetseke mukufambisa mashoko ekuratidzira.
Asi Muzvare Shaw vanoti vanofunga kuti mumakore anotevera kushandiswa kweindaneti muZimbabwe kunenge kwakwira, izvo zvinozoita kuti ishandiswe zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika.
Asi nyanzvi mune dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, vanoti vanofunga kuti ongororo iyi haina hudzamu hwakanyanya, sezvo vazhinji vevana vechidiki vasina mabasa vari kuswera vari paindaneti.
Hurukuro naMuzvare Megan Shaw